सुसमाचारको के हो? Vimeo परमेश्वरको इच्छा देखि. इच्छा परमेश्वरले मेरो साक्षात्कार अर्को क्लिप. म सुसमाचारको पुस्तकमा र्याप गर्न सक्छ भने तिनीहरूले मलाई सोधे2मिनेट. यो मेरो प्रयास थियो
यो एक साक्षात्कार म इच्छा परमेश्वरको गरे को भाग हो. DG हिप हप र Vimeo मा इच्छा परमेश्वरले पाप विरुद्ध लडाई ती राख्दछ रूपमा म अन्य भागहरु पोस्ट छौँ.
जस्तो कि तपाईं जान्दछन् धेरै, म मेरो नवीनतम एल्बम साथ जान पुस्तक मा काम गरिएको छ, असल जीवन. खैर यो पुस्तक Moody प्रकाशक संग जारी गरिनेछ अक्टोबर मा 1,...
असल जीवन भ्रमण यो हप्ता बन्द पछीको! जो मिति तपाईंलाई सबैभन्दा नजिकको हुनेछ पत्ता. हामी मिनियापोलिस मा हुनेछु, मिशिगन, भर्जिनियाबिच, नेशविल, ओरलैंडो, र डलास. More dates will be added...
यी मेरो नयाँ एल्बम "असल जीवन मा मेरो गीत iLove देखि गीत हो।” अरू कुनै को iLove ग्रस्त? पद 1: My girlfriend’s name starts with an I Shines bright like stars in...
मेरो चौथो एकल एल्बम, "असल जीवन” आधिकारिक जारी गरिएको छ! यहाँ आईट्युन्सबाट एल्बम किन्न. तपाईं पनि Lifeway मा पसलहरुमा एल्बम टिप्न सक्छ, परिवार मसीही, Mardel, and Target...